Measles (ဝက်သက်ရောဂါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Measles (ဝက်သက်ရောဂါ)
ရေးသားသူ Dr. Sandy Kyaw ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar
Measles (ဝက်သက်ရောဂါ) ကဘာလဲ။
ဝက်သက် ဒါမှမဟုတ် ဂျိုက်သိုး ရောဂါဟာ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ဒုက္ခပေးတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်သက်ရောဂါဆိုတာ တအားကိုကူးစက်လွယ်တဲ့ ရောဂါဖြစ်ပြီး ၎င်းက ပိုးရှိတဲ့ချွဲတွေ သွားရည်တွေကနေတစ်ဆင့် ပြန့်နှံကူးစက်ပါတယ်။ ဒီရောဂါပိုးရှိသူဟာ သူတို့ချောင်းဆိုးချိန် နှာချေချိန်မှာ လေထဲကိုပိုးတွေ ထုတ်လွှတ်လိုက်သလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Measles (ဝက်သက်ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဝက်သက် ဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါပိုးဟာ မျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုးမှာ အချိန်အကြာကြီး ရှင်သန်နေပါတယ်။ ပိုးရှိတဲ့ အမှုန်လေးတွေက လေထဲတွေ မျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုးတွေမှာ ကျလာခြင်းကြောင့် အဲ့ဒီအမှုန်တွေနဲ့ နီးကပ်စွာရှိနေမယ်ဆို ပိုးကကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ကူးစက်ခံထားရတဲ့လူရဲ့ သောက်ပြီးသားခွက် ဒါမှမဟုတ် သူစားသောက်ထားတဲ့ ပန်းကန် အသုံးအဆောင်တွေကို အတူတူ သုံးမိမယ်ဆိုပါက ရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ပိုများပါတယ်။ ဝက်သက်ရောဂါဟာ ကလေးသေနှုန်းရဲ့ ထိပ်ဆုံးအကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာပါနေပါတယ်။ ၂၀၁၄မှာ ဝက်သက်ရောဂါကြောင့်သေဆုံးမှုဖြစ်တဲ့ ၁၁၄၉၀၀ ယောက်သေဆံးမှုမှာ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ်က အစီရင်ခံတင်ပြထားတာက ဒီသေဆုံးမှုမှာ အများဆုံးခံရတဲ့သားကောင်တွေကတော့ အသက်၅နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
(တစ်ခြား သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိရဖို့ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။)
Measles (ဝက်သက်ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဝက်သက်ရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေဟာ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ထိတွေ့ပြီး ၁၄ရက်အတွင်းမှာ များသောအားဖြင့်ပြတတ်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
ပါးစပ်ထဲမှာ အဖြ ူရောင်အစက်များပေါ်ခြင်း
တစ်ကိုယ်လုံးမှာအနီစက်တွေပေါ်လာတယ်ဆိုတာကတော့ ဝက်သက်ရောဂါရဲ့ အကောင်းဆုံးလက္ခဏာပါပဲ။ ဒီလိုအနီစက်တွေက ၇ရက်အထိကြာတတ်ပြီး များသောအားဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ထိတွေ့ပြီး ၃ရက်ကနေ ၅ရက်အတွင်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဝက်သက်ရောဂါရဲ့ အနီစက်တွေဟာ နီရဲမယ် ယားတဲ့အဖုလေးတွေထမယ် အများအားဖြင့် ခေါင်းပိုင်းမှာစဖြစ်တတ်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံးကို တစ်ဖြည်းဖြည်း ပြန့်သွားတတ်ပါတယ်။
(အပေါ်မှာ မပြောခဲ့တဲ့ လက္ခဏာတွေရှိပါသေးတယ်။ တကယ်လို့သင်က သိချင်သေးတဲ့ လက္ခဏာတွေရှိခဲ့ပါက သင့်ရဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။)
အောက်မှာပြောပြတဲ့အချက်တွေသင့်ဆီမှာ ရှိနေတယ်ဆိုပါက သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တွေ့သင့်ပါတယ်
ရောဂါလက္ခဏာတွေက သက်သာမလာဘူး ဒါမှမဟုတ် ပိုဆိုးလာတယ်ဆိုရင်
အဖျားက ၃၈ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ထက်များလာတယ်ဆိုရင်
တစ်ခြားရောဂါလက္ခဏာတွေသက်သာသွားတယ် ဒါပေမယ့် အဖျားကျန်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်
(အပေါ်မှာ ပြောတဲ့ လက္ခဏာတွေ သင့်ဆီရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် မေးခွန်းမေးစရာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပါက သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓါကိုယ်က ပုံစံမတူစွာတုံ့ပြန်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သင်နဲ့ ဘယ်အရာက အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကို သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ။)
Measles (ဝက်သက်ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဝက်သက်ရောဂါကို ရူဘီးအိုလာ လို့ခေါ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ် ပိုးက ပိုးကူးစက်ခံရတဲ့ ကလေးတွေ ဒါမှမဟုတ် လူကြီးတွေရဲ့ နှာခေါင်း နဲ့လည်ပင်းထဲက ချွဲတွေမှာ နေထိုင်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးကူးစက်ပုံတွေကတော့
ကူးစက်ခံထားရသူကနေ ချောင်းဆိုးခြင်း နှာချေခြင်းတို့ပြ ုလုပ်ချိန် နီးနီးကပ်ကပ်နေထားခြင်း
ပိုးအမှုန်အမွှားတွေ ချွဲတွေကပ်နေတဲ့ မျက်နှာပြင်ကို လက်နဲ့ထိမိကိုင်မိခြင်း ပြီးတော့အဲ့လက်နဲ့ပဲ ပါးစပ်ထဲထည့်မိခြင်း၊မျက်လုံးနဲ့နှာခေါင်းကိုပွတ်ခြင်း၊
ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ ၂နှစ်နာရီလောက်အထိ ကြာအောင် အသက်ရှင်နေနိုင်ပါတယ်။
ဝက်သက်ရောဂါကို ဘာတွေကြောင့်အန္တရာယ် ပိုဖြစ်စေသလဲ
ဝက်သက်ရောဂါက အဓိကအားဖြင့်တော့ ကာကွယ်ဆေးမထိုးတဲ့ ကလေးတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့သောကလေးမိဘတွေက သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကို ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ ကြောက်ကြပါတယ် ကာကွယ်ဆေးကနေရမယ့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုကြောက်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဝက်သက်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့ကလေးတွေနဲ့ လူကြီးတော်တော်များများကတော့ ကာကွယ်ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို သိပ်ကြုံတွေ့ရတာမျိုးမရှိပါဘူး။ ဗီတာမင်အေ ဓါတ်ချို့တဲ့ခြင်းကလည်း ဝက်သက်ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ အန္တရာယ်အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်အေ ချို့တဲ့ နေတဲ့ကလေးတွေမှာ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရဖို့ အခြေအနေပိုများတတ်ပါတယ်။
Measles (ဝက်သက်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်ရဲ့ဆရာဝန်က သင့်ရဲ့ အရေပြားကအနီစက်တွေကို စမ်းသပ်ကြည့်ရှုပြီးတော့ ဝက်သက်လို့ အတည်ပြ ုနိုင်ပါတယ် ဒါ့အပြင် ဝက်သက်ရဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာအဖြူစက်ရှိခြင်း၊ဖျားခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်း၊ လည်ပင်းနာခြင်းတို့ကနေလည်း သိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ စမ်းသက်ကြည့်ရှုရုံနဲ့ ရောဂါနာမည်တပ်ဖို့ မသေချာဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန်က ဝက်သက်ရောဂါဗိုင်းရပ်စ် ရှိမရှိကို သွေးစစ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
Measles (ဝက်သက်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဝက်သက်ရောဂါပျောက်ဖို့အတွက်ဆေးဆိုပြီး မရှိပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ ၂ပတ် ကနေ ၃ပတ်အတွင်းမှာ ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း သင့်ဆရာဝန်က အကြံပေးပါလိမ့်မယ်
acetaminophen သောက်ဖို့ ဖျားတာနဲ့ ကြွက်သားနာတာတွေသက်သာစေဖို့
သင့်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားတက်စေဖို့ အနားယူခိုင်းပါမယ်
ချောင်းဆိုးတာနဲ့ လည်ပင်းနာတာ သက်သာဖို့ အငွေ့နွေးနွေးရှုခိုင်းခြင်းမျိုး
ဝက်သက်ရောဂါ သက်သာစေဖို့ လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများ ကဘာတွေလဲ
အောက်မှာပြောပြမယ့် လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများကနေ သင့်ရဲ့ ဝက်သက်ရောဂါကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ကူညီပေးမှာပါ။
ဝက်သက်ရောဂါတစ်ခါကူးစက်ခံထားပြီးသားလူဟာ ပိုးပြီးနေတတ်ပြီး သူတို့ကနောက်တစ်ခါ ကူးစက်နိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး
တကယ်လို့ ဝက်သက်ရောဂါပိုးမပြီးဘူးဆိုရင်တော့ ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
(တကယ်လို့ သင့်ဆီမှာ မေးခွန်းတွေရှိသေးရင် သင့်အတွက်အကောင်းဆုံး အဖြေရရှိနိုင်ဖို့ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးပါ။)
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 6, 2018
www.healthline.com/health/measles#overview1. Accessed October 12, 2017.
Measles: Causes, symptoms, and treatmentshttps
www.medicalnewstoday.com/articles/37135.php. Accessed October 12, 2017.